Wargeysyada Ma Dhiman, Iibinta Wararka Waa Dhintay | Martech Zone
Axad, Maarso 25, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Dave WinerRobert Scoble, Scott Karp, Mathew Ingram, iyo tan kale oo kale ayaa wax ka qorayay qoraalkii Robert uu ku qoray blog, Wargeysyada ayaa dhintay.
Talaabo dheeri ah ayaan qaadi doonaa… iibinta wararka ayaa dhintay.
Halkaas. Ayaan ku idhi. Intii aan ka shaqeynayay in ka badan toban sano warshadaha warfaafinta, waxaan ula jeedaa. Xaqiiqdu waxay tahay in wargeysyadu aysan mar dambe iibin wararka sida ugu badan ee ay u iibiyaan xayeysiinta. Warku wuxuu muddo dheer ku jiray iibinta wargeysyada. Wargeysyada ayaa midab u yeeshay iibinta xayeysiinta. Wargeysyadu waxay si otomaatig ah u adeegsadaan nidaamyo ficil si ay u iibiyaan xayaysiinta Wargeysyadu waxay u dhiseen dhirta wargeysyada cusub xayeysiinta tayada wanaagsan. Wargeysyadu hadda waxay iibiyaan waraaqaha tooska ah, joornaalada, daabacadaha gaarka ah… maaha inay iibiyaan wararka laakiin waxay kordhineysaa dakhliga xayeysiinta.
Saxafiyiin badan ayaa ka xanaaqi doona hadalkayga. Runtii aad ayaan uga xumahay maxaa yeelay xushmad weyn ayaan u hayaa suxufiyiinta. Ku soo gal qol kasta oo war ah, in kastoo, waxaadna arki doontaa miisaaniyadaha oo la jaray, tifaftirayaasha oo shaqaysanaya gacmo gaab, joornaalada oo buuxinaya meelaha banaan AP nuxurka Daabacayaasha ayaa daabacaya xayeysiis, maahan warar. Warka ayaa ah buuxiyaha inta udhaxeysa xayeysiinta maxaa yeelay xayeysiimaha ayaa lacag keena.
Istaraatijiyadado badan oo wareeg ah oo joornaalka ka mid ah ayaa dhab ahaantii dhigaya xayeysiiska in ka badan wararka… “Iibso Wargeysyada Axadda waxaadna heli doontaa in ka badan $ 100 oo kuuboon ah Ma qiyaasi karo sida ay taasi suxufiga u dareensiineyso mis in lagu wareejiyey meel dhan 25 cent oo warqad musqusha ah.
Runtii uma maleynayo inay tani waxbadan ka duwan tahay isbeddelka warshadaha kale, in kastoo. Qiyaas sida xirfad yaqaanku u lahaa inuu noqdo soo saarida qalabka mitirka mitirka iyo dhisida matoorada baabuurta. Mashiinadaasi waxay ahaayeen farshaxanno, baranayay ganacsigooda sanado badan, dhiganayay iskuulada ganacsiga, barashada cilmiga sare ee cilmiga biraha, xisaabta, iyo howlgalka mashiinada culus. Qiyaas waxa Iyaga waa la beddelay, sidoo kale. CNC Mills iyo robotik ayaa badalay farsamayaqaano xirfad leh. Mid ayaa hadda ku qaabeyn kara kumbuyuutar isla markaaba wuxuu soo saari karaa qeybahooda iyadoo aysan jirin faragelin aadanaha.
Taasi macnaheedu maahan in aan la ixtiraameyn mashiinnada? Dabcan maya. Kaliya waa la bedelay. Saxafiyiinta waa la badalayaa, sidoo kale. Waan ogahay, waan ogahay… saxafiyiinta inay masuul yihiin, waxbarteen, hubiyaan ilaha, waxay masuul ka yihiin hadalkooda. Kuwani dhammaantood waa run laakiin dhaqaalaha ayaa ah waxa ugu dambeyntii guuleysta. U fiirso wararka fiidkii ama akhri wargeys waxaanan damaanad qaadayaa inaad arki doonto ugu yaraan hal tixraac oo ku saabsan baloog, fiidiyoow la soo rogay, ama degel websaydh ah. Warka mar dambe lama helo oo waxaa faafiya saxafiyiinta, aniga ayaa raadinaya aniga iyo idinka oo lagu faafiyo internetka.
Runtii waxa halkan ka dhacay ayaa ah in macaamiisha ' u baahan waayo, gadashada war waa baxay. Saxafiyiinta iyo wargeysyadu waxay ahaayeen dhexdhexaadka bulshada iyo wararka. Ma jirin doorashooyin kale. Hadda xulashooyinku waa kuwo aan dhammaad lahayn oo raqiis ah. Tayadu miyay yaraatay? Malaha. Waa wax badan sida isbarbardhiga Wikipedia iyo Encyclopedia Brittanica. Wikipedia waxay haysaa macluumaad aad u tiro badan oo qiimahoodana kuma baxayo dinaar. Brittanica waxay leedahay qayb yar oo ka mid ah maqaallada laakiin tayo wanaagsan. Goorma ayey ahayd markii ugu dambeysay ee aad iibsato encyclopedia? Taasi waa jawaabtaada.
Runtu waxay tahay inaan wax ka qori karo Google-da cusub ee Blogbar. Boostada waxaa laga yaabaa inay leedahay qaladaad higaad iyo naxwe ahaan, waxaa laga yaabaa inaan tixraacyo laheyn, ma noqon karto madadaalo sida ay noqon laheyd bogga Tiknoolajiyadda Times - laakiin waxay gaartay kumanaan akhristayaal ah oo si daacadnimo ah u danaynayn waxyaabahaas. Way ku qanacsan yihiin inaan wax ka qoray oo ay hadda u adeegsanayaan waxyaabahaas si ay u horumariyaan goobahooda. Uma qaadan wariye inuu sheekada jebiyo.
Internetku waa warbaahin cusub oo beddeleysa wararka ku saabsan waraaqaha iyo saxafiyiinta. Waa xoogaa murugo, waa ganacsi fantastik ah oo lumaya. Weli waxaa jiri doona saxafiyiin, tiro intaa le'eg. Weli waxaa jiri doona wargeysyo, oo aan badnayn. Aynu wajahno, in kastoo. Wargeysyadu way sii wadi doonaan inay helaan habab kale oo lagu iibiyo xayeysiinta. Waxaa laga yaabaa inaysan khad ku oollin geedaha dhintay, laakiin waxay heli doonaan waddo.
Wargeysyadu ma dhiman, iibinta wararka ayaa dhintay.
Maareynta Jawaabta Emailka
> Wargeysyadu hadda waxay iibiyaan waraaqaha tooska ah, joornaalada, daabacadaha gaarka ah?
Anigu sidaas ayaan ula xidhiidhi karaa taas. Warqadeena laba jeer ee usbuuclaha ah waxay leedahay waraaqo badan oo Talaado ah marka loo eego bogagga wararka.
Sida badan sida warshadaha muusikada iyo filimada warshadaha wargeysyadu waa inay raadiyaan habab cusub oo ay iskaga iibin karaan - kana dhigaan waayo-aragnimo maalinle ah oo dadku aysan ka fikireynin in la tuuro 1.50.
Tani waxay xitaa uga sii badan tahay wargeysyada maxalliga ah ee yar yar
Waan jeclahay qodobkaaga ku saabsan wararka maxalliga ah. Weli waxaan ku raaxaystaa wargeyskeena Ganacsi halkan iyo sidoo kale wargeyskayga Beesha. Weli waxay ku leeyihiin faa iido weyn shabaqa - ku xirnaantooda bulshada.
Waxaase la yaab leh in dhammaan wargeysyada waaweyn ay sii wadaan inay wax u iibiyaan kooxo waa weyn oo baahinta wararka sii xoojiya. Halkan Indy, Xiddiga waxaa iska leh Gannett. Gannett wuxuu sii wadaa inuu yareeyo ilaha maxaliga ah iskuna dayo inuu wax badan u riixo shirkadaha iyadoo loo marayo isdhexgalka nidaamka. Waxay jajabineysaa warqaddii bulshada, in kastoo. Ismiidaamin.
Si fudud ugama qalmin aniga inaan iibsado warqadda. Waxaan sidaas sameeyay MAALIN WALBA in ka badan toban sano. Waxaan si daacad ah u dhihi karaa in aanan ka yareyn warka helitaanka wararkeyga ee qadka tooska ah.
Kanada gudaheeda - gaar ahaan Ontaariyo oo dhan wargeysyada yaryar waxaa iska leh mid ka mid ah laba warbaahin warbaahineed oo waaweyn. Uma maleynayo inay jiraan wargeysyo si madaxbanaan u madax banaan oo cawaaqib xumo ah oo ku hartay magaalooyinka yar yar ama kuwa dhexe.
Kani waa farxad shantii ilaa tobankii sano ee la soo dhaafay halkaas oo labada koox ay ku kala iibsadeen. Waxaan u maleynayaa runtii inaan wax qiimo leh ku weynay markii ay taasi dhacday.
Maqaal wanaagsan! Uma maleynayo inay tani layaab weyn noqoneyso - mar alla markii webku bilaabay inuu dilo wargeysyada xayeysiinta ah dhibaato ayaa soo food saartay, ama waa inay ugu yaraan ogaadaan in dhibaatada ay wadada ku soo jirtay.
Paul A. Xero
Dhibaatada jirta ayaa ah wargeysyada oo aan SADDEXDA warka tobanaan sano. Mar waxaa jiray dagaallo wargeysyo ku saabsan sheekooyin kulul. Goorma ayuu ahaa dagaalkii ugu dambeeyay ee nuucaan ah qofna wuu xusuusan karaa?
Tifatiraha ugu sareeya ee wargeysku waa inuu sidoo kale noqdaa iibiyaha ugu fiican iyo madaxa suuq geynta. Safar aad ku tagto goob kasta oo wargeys oo waaweyn waxay caddeyn kartaa in tani aysan ahayn adduunkan maanta.
Fiiri jeldiga hore ee joornaalada ku yaal joornaalka joornaalka marka la barbar dhigo bogagga hore ee joornaalada halkaas lagu soo bandhigay. Mid ayaa ku doodi kara in joornaalada badankood ay isticmaalaan "khiyaanooyinka 78-Siyaabaha-u-Nadiifiya-Galmadaada Nolosha" si ay u iibiyaan akhristayaasha. Weli lama dafiri karo in wargeysyada si nidaamsan hoosta uga iibiyaan wararkooda uguna soo bandhigaan akhristayaasha. Waxay u egtahay sidii inaan u shaqeyneyno inaan ka dhigno bogga hore mid caajis badan oo aan ka habooneyn sida loo baahan yahay.
Tifatirayaasha waxay ku doodi doonaan inay yihiin "xayeysiin" inay jabinayso ganacsigooda. Waxaan ku doodi karaa in warbixinta ugu fiican, uguna muhiimsan, ee ku guuleysata sanadkan Pulitzer ay tahay mid qiimo yar haddii inta badan macaamiisha wargeysku aysan ku mashquulin akhrinta taxanaha.
Waa inaan ku fiicnaano iibinta wararka markale. Waa inaan ku fiicnaano inaan u sheegno akhristayaasha waxa iyaga ku jira haddii ay akhriyaan.
Ugudambeyn waa inaan ku faraxsanahay wararka iyo waxyaabaha kale ee aan maalin walba, usbuuc walba iyo bilwalba soo gudbino nafteena ka dibna aan u sheegno xamaasadaas habka faafa ee kuwa aan rajeyneyno inaan gaarno oo aan saameyn ku yeelano wararka. Haddii aan tafatirayaal ahaan howshan qabanno, doolarku wuu raaci doonaa oo wargeysyada (si kasta oo loo geeyoba) way horumari doonaan.